रंग दल्दा सर्ला रोग – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
रंग दल्दा सर्ला रोग
२०७१ फाल्गुन २१, बिहीबार ०१:५७ गते
भरतपुर । रंगहरुको पर्व होली नेपाली संस्कृतिमा विशेष महत्व राख्ने पर्व हो । यस पर्वमा साथीभाई, आफन्तजन, छरछिमेकीसँग विभिन्न प्रकारका रंगहरु दलेर आपसी सद्भाव साट्ने गरिन्छ ।
आपसमा नजिकिएर रंग खेल्ने यस पर्व यस पटक भने केही सचेत भएर खेल्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय स्वाइन फ्लुको संक्रमण जताततै देखिन थालेपछि विशेष चनाखो भएर रंग खेल्नुपर्ने चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । थोरै लापरबाहीले पनि स्वाइन फ्लुले महामारी नलेला भन्न सकिन्न । आपसमा स्पर्श र अंकमाल गर्दै प्रेम र सद्भाव साटासाट गर्ने यस पर्व स्वाइन फ्लुको डरका बीच खेल्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले जताततै स्वाइन फ्लुको सन्त्रास छ । मानिसहरु मास्क लगाएर हिँड्ने गरेका छन् । हत्तपत्त जोकोहीसँग हात मिलाउन अप्ठेरो मान्छन् । तर, रंग दल्न अनिवार्य हातको स्पर्श आवश्यक हुने र प्रायः समूहमा रहेर खेलिने हुँदा स्वाइनको संक्रमण होलीको बेलामा झनै फैलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा. प्रकाश खतिवडा स्वास्थ्यसम्बन्धी सतर्कता अपनाएर फागु मनाउन सबैलाई सल्लाह दिन्छन् । अन्य व्यक्तिबाट कम्तीमा एक मिटर टाढा बस्ने, अंकमाल र चुम्बन नगर्ने, हात नधोइ आँखा, नाक वा मुख नछुने गर्नाले स्वाइन फ्लुबाट जोगिन सकिने डा. खतिवडाको भनाइ छ ।
स्वाइन फ्लुको प्रभाव चितवनमा उच्च रहेकाले चिकित्सकहरु जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी रंग खेल्न आग्रह गरिरहेका छन् । चितवनमै ६ जनामा स्वाइन फ्लु भेटिएको छ । केही परीक्षणका लागि राजधानी पठाइएको छ । छिमेकी देश भारतको गुजरात, महाराष्ट्रलगायतका क्षेत्रमा स्वाइन फ्लू संक्रमणबाट हजार बढी ज्यान गइसकेको विदेशी संचार माध्यमहरुले बताएका छन् ।
स्वाइन फ्लुमात्र होइन, श्वासप्रश्वासबाट सर्ने अन्य रोग, छालाका रोगहरुको समेत जोखिम यस्तो अवस्थामा हुने भएकाले सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । रंगकै कारण एलर्जीको पनि डर हुन्छ ।
स्वाइन फ्लुले पार्न सक्ने प्रभाव एकातर्फ रहँदा अर्कोतर्फ भन्ने संस्कृति जोगाउने नाममा भित्रिएको विकृति नियन्त्रण गर्न चितवन प्रशासनले होलीमा विशेष निगरानी गर्ने भएको छ । चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी सहकुलबहादुर थापाले होलीमा हुन सक्ने अपराधिक घटनातर्फ प्रहरी चनाखो रहेको बताए । अपरिचितलाई रंग हान्ने, रासायनिक वस्तु मिसावट गरी रंग खेल्ने, मोबिल दल्ने, लोला प्रहार गर्ने, अण्डा हान्ने कार्य गरेमा कानुनी कारबाही गरिने उनले बताए ।
चितवन प्रहरीका डिएसपी राजन अधिकारीले रमाइलोको नाममा अशान्ति फैलाउने, मोटरसाइकलमा तेब्बर हिँड्ने, हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने आदिलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जनाए ।